"Nokuti kana ndichinyengetera norumwe rurimi, mweya wangu unonyengetera asi kufunga kwangu kunoshaiwa zvibereko. Zvino chinyiko? Ndichanyengetera nomweya wangu vuye ndichanyengetera nokufunga kwangu vo; ndichaimba nomweya wangu, vuye ndichaimba nokufunga kwangu vo" (1 VaKorinte 14:14-15).
Panyika pane mitauro yakawanda. Mitauro iyi ine mashoko akawanda. Asi mashoko aya ose haagoni kubudisa zvose zvaungada kutaura kuna Mwari. Mitauro yenyika ino yakasviba. Haisi iyo yatinganyanya kushandisa kutaura naBaba vedu vekudenga. Baba vekudenga ndiMwari vatsvene.Â Ndiko kusaka Mweya Mutsvene vakatipa mumwe mutauro wekushandisa. Mutauro uyu wakachena. Mutsvene. Ndiwo unogamuchirwa naMwari. Mutauro uyu unonzi mutauro wendimi.
Vakawanda vanongoziva zvekunamata nepfungwa dzavo. Vanongoziva kunamata vachishandisa mitauro yavo. Asi mitauro iyi haina kukwana. Hauna zvakawanda zvaungaita nemitauro yakadai. Ungashandisa hako mashoko akaisvonaka pakunamata. Ungataura zvakadzama zvepamweya nemitauro iyi. Asi hazvimboenzani nekushandisa mutauro waMweya Mutsvene.
Ndiko kusaka Pauro akanyora ndima yatavhura nayo. Mweya Mutsvene ndivo vakamushandisa kunyora mashoko aya. Pauro anoti anonamata nemweya wake. Mushure mazvo, anozonamata nepfungwa dzake. Asi izvi hazvisi izvo zvinoitwa nevamwe Vakristu. Vanopesanisa zviviri izvi. Vanotanga vanamata nepfungwa dzavo. Mushure, vanozonamata nemweya yavo. Ndiko kunge vatonamata nemweya yavo. Kunamata nemweya chinhu chavanozongoitavo. Izvozvo hazvina kunaka.
Unofanira kutanga wanamata nemweya wako. Unofanira kunamata kudai neshungu. Ndipo paunozogona kunamata nepfungwa dzako. Kunamata mumweya ndiko kunofanira kutanga. Ndiko kunopa pfungwa dzako mashoko okutaura. Mashoko akadai ndiwo anoshanda. Ndiwo anogadzirisa zvinhu. Zvino, kunamata mumweya hakusi kunamatira mumoyo. Haungotsinzini, wakanyarara. Haungovimbi kuti Mwari vachavona zviri mumoyo mako. Kwete. Kunamata nemweya kunamata nendimi. Mutauro wendimi mutauro unoshandiswa naMweya Mutsvene. Mutauro unoshandiswa neVamwari. Pfungwa hadzigoni kududzira mutauro uyu. Mutauro unoshandiswa munyika yemweya. Unoshandiswa kutaura zvinhu zvisinganzwisisiwi panyika pano. Unoshandiswa kutaura zvinhu zvisinganzwisisiwi nevanhu venyama.
Satani anovhiringika patinonamata nemutauro uyu. Vabati vake vanovhiringika patinonamata nedzimwe ndimi. Tinenge tiri kutaura mutauro wekwedu. Tinenge tiri kutaura naBaba vedu vekudenga pachavo. Saka takaropafadzwa zvikuru. Tinogona kuziva zvinhu zvinozikanwa neVamwari chete. Tinogona kutaura pamusoro pezvinhu izvi. Mwari ngavapiwe mbiri yose!
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Makaita kuti ndigone kutaura nedzimwe ndimi. Ichi chiropafadzo chikuru. Mweya Mutsvene vari kushanda mandiri. Vari kushanda zvinoshamisa. Nokudaro, hupenyu hwangu huzere nerunako. Huzere nekubwinya. Muzita raJesu. Ameni.
Judasi 1:20 AMPC